ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ တုပ်ကွေးဖြစ်ခဲ့ရင် - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 27/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်က အခြားအချိန်တွေထက် ထိခိုက်နိုင်ခြေပိုများတာကြောင့် သေချာလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုမှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရာသီဥတုအေးအေးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်း အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ ဆေးတွေကိုထင်တိုင်းသောက်လို့မဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ ဘယ်လိုဂရုစိုက်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါရစေ။
ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ အရာရာကို သတိထားရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဖျားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာဖြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထိခိုက်ခံစားရမယ့်သူက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဖျားဝင်ပြီဆိုရင် ဆေးသောက်ရင် ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ကြိတ်မှိတ်ခံစားရတာကများပါတယ်။ ရိုးရိုးဖျားတာဆိုတော်သေးရဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်​ပြီ ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးအခက်တွေ့ပြီပေါ့။ ဆေးသောက်လိုက်ရင် ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်မှာလည်း စိုးတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ရမလဲ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား…..
အအေးမိတာလား …. တုပ်ကွေးဖြစ်တာလား…..
အအေးမိတာ နဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေရဲ့လက္ခဏာတွေက ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ အအေးမိရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်
တုပ်ကွေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလက္ခဏာတွေအပြင် ချမ်းတုန်မယ်၊ အော့အန်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်မယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ အနေနဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေက သက်သာစေနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာတုပ်ကွေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီအဆင့်လေးတွေကို အရင်လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့
ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူပါ – အနားယူတာက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး တုပ်ကွေးကို မြန်မြန်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အရည်များများသောက်ပါ – ရေအပါအဝင်၊ အုန်းရည်၊ စွပ်ပြုတ်တို့လိုမျိုး အရည်ကိုများများသောက်ပေးတာက ကိုယ်အပူချိန်ကို ကျစေပြီး အအေးမိ၊တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေကို မြန်မြန်သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆားရည်နဲ့ ပလုပ်ကျင်းပါ – ဆားရည်နဲ့ ပလုပ်ကျင်းတာက လည်ချောင်းနာတာ နဲ့ ချောင်းဆိုးတာကိုတင်မဟုတ်ဘဲ အအေးမိ၊တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ ပိုးတွေကိုပါအထိရောက်ဆုံးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကို လုပ်ကြည့်ပေမယ့် မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့
နှာခေါင်းထဲကို ဆားရည်အစက်ချပါ – ဒီလိုလုပ်ပေးတာက နှာခေါင်းပိတ်တာကို သက်သာစေနိုင်ပြီး နှာခေါင်းတွင်းက တစ်ရှူးတွေ ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေနိုင်သလို တုပ်ကွေးကို မြန်မြန်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ရှူပေးပါ – အဝကျယ် ဇလုံတစ်ခုထဲမှာ ရေနွေးထည့်ပြီး ရေနွေးငွေ့ရှူပေးတာကလည်း အဖျားသက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပျားသံပရာ ဖျော်ရည်သောက်ပါ – ရေနွေးနွေးထဲကို ပျားရည် နဲ့ သံပရာရည်ထည့်ပြီးသောက်ပေးတာက လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေနိုင်သလို အဖျားကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးဝတ်ကပ်ပါ – အဖျားကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်နေတာကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင် ရေနွေးဝတ်ကပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားကသာမန်ထက်နည်းနေတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မေမေ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် မွေးမလာသေးတဲ့ ဘေဘီလေးကို ငြင်းဆန်တာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်းနေစေတဲ့သဘောပါ။ ဒီအနေအထားကပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေကို ဖျားနာလွယ်စေတာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာ၊ ထိပ်ကပ်နာစတဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်ပါတယ်
ရောဂါတစ်ခုကို မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်တာကအကောင်းဆုံးပါ။ အထူးသဖြင့် ဆေးတွေကို ထင်တိုင်းသောက်လို့မရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေမှာဆိုရင်ပေါ့။ ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အအေးမိ၊တုပ်ကွေးဖြစ်တာနဲ့ ဒီရောဂါတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်
သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပါ
ဒီအချက်လေးတွေကို ဂရုစိုက်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်လိုက်ပါ မေမေတို့ရေ…………….
Cold and flu during pregnancy https://www.pregnancybirthbaby.org.au/cold-and-flu-during-pregnancy Accessed Date5February 2020
How to TreataCold or Flu When You’re Pregnant https://www.healthline.com/health/cold-flu/treating-during-pregnancy Accessed Date5February 2020
Do I Have the Flu? https://www.webmd.com/cold-and-flu/ss/slideshow-flu-symptoms-treatment Accessed Date5February 2020